Ahoana ny fomba hanamboarana ny kojakoja misy ny tsipika nilona mora ho an'ny mpanamory Bosch - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ahoana ny fanamboarana tsipika nylon mora vidy ho an'ny mpanamory Bosch
Tsy fanamboarana irery akory io fa fanodikodinam-bola kely hitehirizana vola amintsika. Ny kozatra Bosch dia lafo be ary amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana ny tsipika nylon amin'ny marika hafa ao amin'ny fanapahana borosy elektrika Bosch.
Manana mpanapaka borosy elektrika aho Bosch AFS 23-37 Hery 1000 W. Mandeha tsara. Faly be aho amin'ny fampiasana tsy misy fepetra toy ilay ilaiko. Izy io dia mpanapaka borosy elektrika, fa tsy bateria, tsy maintsy ampifandraisina amin'ny herinaratra hiasa.
Na izany aza, ny vidin'ny nyon ofisialin'ny marika dia lafo be, somary lafo be ary amboarina mba hiafaranao amin'ny farany ny tahiriny. Amin'ity tranga ity, ny kofehy nylon dia miaraka amina karazana bolt eo afovoany izay manakana azy tsy handositra.
Ireo amin'ny sary miaraka amin'ny vidin'ny milina € 25 ny fonosana misy singa 10 an'ny 30cm izany hoe, € 25 mandritra ny 3 metatra. Raha ny coil dia mitentina 10 € amin'ny 60 na 70 metatra antsika. Betsaka ny fahasamihafana.
Novidiko ireto 2 ireto
Kofehy nylon 3mm
Raha liana koa ianao afaka afaka Mampiasà kiran'ny kofehy nylon Avelako anao ny lalana roa.
Mampiasà indray ny bolt
Raha hitantsika ireo kojakoja fanampiny dia manana bolt aluminium kely izy ireo. Tsy azoko antoka hoe inona no hitranga raha apetrakao mivantana ny tariby notapahana. Raha mahita ny fomba ahazoako azy dia mieritreritra aho fa rehefa tratry ny ahitra izy dia ho solafaka ary hiala amin'ny loha. Izany no antony hampiasantsika hampiasa ireo bolt.
Mamela horonantsary misy fiovana aho
Raha tianao ny mahita ny fizotrany tsikelikely amin'ny sary dia eto no anananao.
Makà plastika orona vitsivitsy, ary esory ny fiovana. Azontsika atao koa ny mahazo ny ambiny sisa tavela eto amintsika
Ary mila manapaka ilay vaovao fotsiny ianao dia atsofohy ary tsindrio indray mba tsy ho solafaka.
Mividy loha manerantany
Safidy hafa tsara io. Nividy loha hafa manerantany na mifanaraka amin'ny masininay izahay ary afaka mampiasa karazana kofehy rehetra izahay izao. Ireo karazana loha ireo dia eo anelanelan'ny € 5 sy € 15.
Amin'izany no ahafahantsika miova amin'ny kofehy rehetra isaky ny maniry. Nividy an'ity iray ity aho na dia mbola tsy nanandrana azy aza
Miaraka amin'ny lohako dia nividy tariby nandrandrana 3,5mm aho ary koa tariby vy nopetahana mba hitsapana ny fomba fiasa satria mieritreritra aho fa tsy dia hitafy firy izany.
Matahotra aho fa hitsambikina ny vy sasany, saingy rehefa manandrana aho dia holazaiko anao.
Mendrika ve ny mpanamory borosy elektrika?
Ity no fanontaniana apetraky ny ankamaroan'ny olona amiko izay ilazako fa nividy herinaratra aho.
Te-hamaly an'io aho satria zavatra anontaniana miverimberina io.
Ny valiny toy ny mahazatra dia miankina. Miankina amin'izay ilainao izany. Hampiasa azy io amin'ny sehatry ny tondra-drano 2 aho, izay ahafahako mampifandray azy amin'ny fanitarana tsy misy olana. Rehefa vita aho dia entiko mody ao anaty fiara ary apetrako ao anaty lalimoara. Ary ankasitrahana fa tsy voahosotra lasantsy sy solika, tsy mamofona ary na dia toa hadalana aza, ankasitrahana fa rehefa ampiasainao io dia tsy mitabataba be loatra.
Saingy tsy maintsy fantatrao izay novidinao, raha ity maodely manokana ity (ny Bosch ASF 23 - 37) dia mila manamafy ny fiarovana ianao mba hiasa ary somary manahirana ihany. Fa ny ambiny tonga lafatra.
Raha mila milina manana herinaratra ara-dalàna ianao dia hampiasainao amin'ny tontolo ahafahanao mampifandray azy tsy misy olana ary mila zavatra somary mitabataba ianao ary tsy misy loto (mba tsy handoto ny fiara na rehefa tazomiko izy ao an-trano) Eny, ny herinaratra no safidinao tsara indrindra.
Raha mila mitondra azy any amin'ny toerana tsy misy herinaratra ianao dia mila hery be dia be mihoatra ny 1CV
Tsy dia mitabataba
Aza mahalala momba ny lasantsy sy ny solika
Mila mifandray foana izy io ary very fahalalahana
Tsy afaka mampiasa azy ianao raha tsy misy herinaratra
Tsy misy maodely matanjaka toy ny amin'ny lasantsy
Raha manana fanontaniana ianao dia azonao atao ny manontany ahy amin'ny hevitra Ary raha tianao ny hanitaranako ity lohahevitra ity dia azoko atao torolàlana momba ny fividianana borosy.
Fanehoan-kevitra 1 momba ny «Ahoana ny fomba hanamboarana ny faritra tsy misy vidiny amin'ny kofehy nylon ho an'ny famafazana Bosch»
14 Aogositra 2021 amin'ny 10:53 maraina
Salama: manana mpanapaka borosy AFS 23-37 aho ary mitady zavatra mifanaraka amin'ny tsipika fanoloana hitako ny pejinao. Misaotra indrindra nizara ny hevitrao. Ankasitrahako raha manavao ny rohy izay nitarika ny lohateny mifanentana ianao; Toa tsy misy intsony ilay vokatra ary tsy haiko hoe iza no tondroin'izany. Mamerina ny fisaorana anao.
1 Mampiasà indray ny bolt
2 Mividy loha manerantany
3 Mendrika ve ny mpanamory borosy elektrika?